Ziziphi izinto ezipasa phezulu kwi-Amazon kunye nendlela onokuzuza ngayo kubo?
Ngaba uke wazibuza ukuba zeziphi iimveliso eziphambili kwi-Amazon? Le ngcaciso ayifihliwe kuwo wonke umntu. Nangona kunjalo, akubona bonke abasebenzisi abaphakathi, kunye nabathengisi be-intanethi, bayazi ukuba bayifumana njani. Nangona kunjalo, abo bafuna iimveliso ukuba bathengise kwi-e-commerce site okanye ngqo kwi-Amazon banomdla kule nkcazelo.
Kule nqaku, siza kuxubusha ezinye izinto ezifunyenwe kwi-TOP kwi-Amazon ezinokukunceda wenze i-fortune. Yaye ukuba uya kungena kwi-shishini yokuthutha okanye i-e-yorhwebo shishini, unokubangela ezi zinto okanye iimveliso ezifanayo kwiipulatifti zesebenzi, njengef.i. Alibaba okanye iAliexpress. Ngaphezu koko, siza kuxubusha iindlela zokudala umkhankaso wokuthengisa ukuthengisa iimveliso eziphambili ngempumelelo.
Ngoko-ke, makhe sixoxe ngezinto ezithile ezishushu ezise-Amazon esinokuzisebenzisa ukunyusa imali.
Izinto ezifunyenweyo kwi-Amazon
Ngaphambi kokuba siqhube kwingxoxo yezinto ezifunyenwe kwi-TOP kwi-Amazon, ndingathanda ukukuvula into encinane kodwa imfihlo ye-e-commerce. Ukuze uphumelele kufuneka wenze ukugxila kumthengi wakho, kungekhona kwingeniso yakho. Kufuneka ufumane ingxaki yomsebenzisi uze unikeze isisombululo esona siphumo esithile kwimveliso yakho. Ukuseka inkqubo efanelekileyo yokuthengisa, kufuneka ufumane isizathu sokuba abathengi bakho bangasebenzisa imali kwizinto ocebisayo. Kukho njalo isizathu esithile emva kokuthenga nganye. Ukuba uyazi le sizathu, unokulawula inkqubo yokuthengisa kwaye wenze imali rhoqo. Into efanelekileyo malunga nayo kukuba uyadinga nokuba ukhuthaze iimveliso zakho njengoko abasebenzisi banomdla kuwe. Ngazo zonke ezi zinto zikhankanywe ndifuna ukuthetha ukuba kufuneka ugxininise ngakumbi ekufumaneni iqela eliphambili labantu abafuna indlela yokusombulula imicimbi yabo ephambili. Ukuba unethamsanqa ukufumana aba bantu, ungabathengisa iimveliso ezininzi ezinxulumene neengxaki zabo endaweni enye.
Ngoko ke, ngoku xa unengcamango yokuba uqalise ishishini lakho le-ecommerce, siyakwazi ukuqhubela phambili kwizinto ezifunyenwe kwi-TOP kwi-Amazon.
Kwiintsuku zethu, yeemfuno ngenxa yokuzalisa ngokuzenzekelayo iinkqubo zomsebenzi kunye nokuveliswa kwazo zihambelana neenjongo ezifanayo njengazo iipilisi kunye nee-laptops.
Zizithengwa kakhulu ngamashishini amakhulu kunye neenkampani zedijithali njengoko zinokunceda ngenani ngeenjongo ezahlukeneyo.Izihlwele zakho ezijoliswe kuzo ziiofisi kunye neendawo zokusebenzela ezifuna iirektops ezinkulu kubaqeshwa babo. Ngaphezu koko, abasebenzi bakho banomdla kubalingisi beefayile, abadlali be-gamers kunye nabasebenzisi abaqhelekileyo bePC abafuna amava amanqaku aphezulu.
Abagadi beekhompyutha kufakwa kwi-market niche apho inokufumana khona imali eninzi kwi-intengiso enye.
Phakathi kwalaba bathengi bekhompyutheni abathengiweyo, singakwazi ukwahlula ezi zinto zilandelayo: HP, LG, ASUS, Samsung, kunye nePixie.
Izitulo zezemidlalo zihamba ngokuthe tye kwiintsuku zethu ngenxa yokunyuka kweshishini lokudlala kwi-intanethi. Zonke izitulo zokudlala zibiza ngexabiso ngokungagqibekanga ngokuba zikhona izinto ezifunyenwe kwi-TOP kwi-Amazon. Olu hlobo lwezitulo lubekwe kwi-niche eneendleko ezininzi ezifana nezixhobo zokudlala, iipheripheral, njalonjalo.
Singawujonga uluhlu olubanzi lwexabiso kwi-market niche. Iindleko zesitulo esinye sokudlala singaqala nge $ 500 kwaye ziphakanyiselwe kuma-20,000.
Abaphulaphuli abanokuthi banomdla kule miveliso ekhethekileyo kubandakanya abathanda umdlalo, abadlali bezemidlalo, abahloli bezemidlalo, abalandeli bezemidlalo kunye nabadlali bebhola yePC kunye nevidiyo.
Phakathi kweempawu ezisemgangathweni ezifanelekileyo kwiindawo zokudlala ezithengiswayo, siyakwazi ukwahlula oku kulandelayo - I-Openwheeler, Playseat, uMlawuli, kunye ne-E-WIN.
Elinye iqela lezinto ezithandayo . Phantse bonke abaqhubi basebenzisa ezi zixhobo ukuhamba kwindawo abayidingayo. Iifowuni zeGPS zibonelela abasebenzisi ngeemephu ezichanekileyo kunye neendlela ezingaphezu kwee-smartphone. Awudingi ukuxhomekeka kwiimephu kunye neendlela zokuthumela iimpawu xa unesisombululo se-GPS. Ngoko, ingasetyenziswa njengobungqina besikhathi esizayo..Ngaphezu koko, ezi zixhobo ziphatheka kwaye zingasetyenziswa naphi na. Ukuhlakulela olu hlobo lwemveliso, uza kunceda abasebenzisi ukuba basombulule iingxaki zabo zangoku. Kuthetha ukuba uya kuba luncedo kwaye iimveliso zakho ziya kuba zifuna kakhulu.
Abathengi beeteksi zeGPS abaqhubi beeteksi, abaqhubi, abaqhubi beenkonzo, abaqhubi abaqhelekileyo, abaqhubi bexesha lokuqala, amagosa amapolisa kunye nabo bonke abantu abashishini abafuna ukwenza indlela yabo yezoshishino kunye neentlanganiso.
Iimpawu zorhwebo ezifanelekileyo kakhulu zokuthengisa i-GPS ziquka i-Garmin, i-Samsung kunye neRandi.
Indlela yokuphumelela kwi-Amazon ekuthengiseni izinto eziphambili ze-TOP?
Okokuqala, kufuneka udale isayithi yokuphonononga malunga nomkhiqizo ofuna ukuyithengisa kwaye uzame ukubeka eli nqanaba kwiwebhu. Kufuneka ukhuthaze le sayithi kwiinjini zokusesha ezifana ne-Google okanye i-Bing ngumbuzo wakho ojoliswe kuwo. Kufuneka wenze uluhlu lwezona zinto zifanelekileyo kwiimarike zakho zeevenkile ze-ecommerce. Ngako oko, uya kufuna uncedo olulungileyo lwe-injini yophando okanye utyalomali ngemali kwisakhiwo soqhagamshelwano ngokusebenzisa amanethiwekhi angasese kwiiblogi okanye iinkqubo ezidibeneyo. Unokuzuza ngokusebenzisa izi ndawo zokuhlaziya ezigunyazisiweyo ezilandelayo: Uphando lwaBathengi, iiNgxelo zeBathengi, i-CNet kunye ne-Engaged.
Kwinqanaba lesibini, unokudala umlinganiselo weefayile wewebhu. Apha unokuqhathanisa uluhlu lweemveliso ezifanayo ze-niche ezibonisa amanani abadayisi abahlukeneyo. Iindawo zokuthelekisa azixhomekeke kuphela kwi-injini yokucwangciswa kweenjini kwaye ziyakwazi ukuhambisa ithrafikhi kwimithombo ethile yewebhu. Ukubonelela ngeendwendwe ezahlukeneyo, iinkqubo zexabiso, iimodeli kunye nokukhetha okuthelekisa, kwaye ziya kuba ziindwendwe zakho eziqhelekileyo, ukuzisa i-traffic converted.
Kwaye, ekugqibeleni, unokudala iblogi ye-niche kwaye uthethe ngeemveliso zakho ze-niche ngokupheleleyo. Kuyindlela ekhuselekileyo yokuphromotha ebonisa ubuchule bakho kulo mkhakha kunye nokudala umfanekiso wesimo esihle. Kufuneka unike abafundi bakho igunya kunye nomxholo ochaphazelekayo kunye nolwazi olunomdla kunye nedatha yophando.
Kule nqaku, siqokelela izinto eziphambili ze-Amazon ezifunwa kwi-Amazon esinethemba lokuba ziya kukunika iingcamango zeemveliso ukukhuthaza ukufumana imali evela kwi-platform ye-Amazon yokuthengisa. Izinto endizikhankanyile kweli nqaku, zineethegi eziphezulu zamanani kwaye zithengise kakuhle phakathi kwe-Amazon ukusesha, ngoko unako onke amathuba okusebenza kakuhle ne-Amazon yakho shishini.